जनताको माग : अबको प्रधानमन्त्री कुलमान घिसिङ – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/जनताको माग : अबको प्रधानमन्त्री कुलमान घिसिङ
जनताको माग : अबको प्रधानमन्त्री कुलमान घिसिङ
कुलमान घिसिङ अहिले चर्चामा रहेकामध्ये एक हुनु । उहाँको आँसु , रोदनभित्र मुलुकको आशा भरोसा अनि विकृति र कुण्ठा पनि सँगसँगै चर्चामा छ । आखिर कुलमान को हुन् ? उनले जीवनमा कसरी प्रगति गरे ? के के हण्डरहरू खाए ? भने सन्दर्भमा योहो टेलिभिजनको पीवाईएल सो (PYL SHOW) कार्यक्रममा कुलमान घिसिङसँग गरिएको रोचक कुराकानी ।
रामेछापको दुर्गममा गाउँको सरकारी स्कुलमा पढेको एक सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ । देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्र्याउने अभियन्ता कुलमान घिसिङले विद्यालय पढ्दाको अनुभव यसरी सुनाउँ छन् :
गाउँमा टुकी बालेर पढ्थेँ । राति अबेरसम्म टुकी छेउमा बसेर पढ्दा नाकमा कालो ध्वाँसो समेत बसेको हुन्थ्यो ।
काठमाडौँलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएर चर्चा कमाएमा कुलमान भन्छन्न् मैले काठमाडौँ आएपछि नै हो, बिजुली देखेको । विद्यालयमा सधैं प्रथम हुने कुलमानले जब काठमाडौँमा आएर बिजुली देखे, तब उनले कसम खाए मेरो गाउँमा पनि यसैगरी बिजुली बाल्छु । अहिले उहाँले गाउँमा बिजुली बालिसकेका छन् । उहाँले आफ्नो गाउँमात्रै हैन, देशैभरि उज्यालो बनाउने अभियन्ता बनेका छन्न् ।
कुलमान घिसिङ जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक बनेर आए, उनले आफूले के गर्न सक्छु भनेर देखाइसकेका छन् । कुलमानले थालेको लोडसेडिङ मुक्त अभियानले चौतर्फी प्रशंसा पाइरहेको छ । आखिर को हुन् त कुलमान ?
थप जानकारीका लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोस् ।
आइसोलेनमा बसेका सङ्क्रमित छमछमी नाच्न थाले, भिडियो बन्यो भाईरल (भिडियो सहित)
धेरै पछि भाग्यको यस्तो सहयोग,३९ जनाको हेर्नुहोस यस्तो बि जोग (भिडियो)
सरकारी मोटरसाइकल चढ्ने भाइरल युवायुवती मिडियामा, सनसनीपूर्ण खुलासा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झन झाँगियो ज्योतिषी हरिहर अधिकारी र नायिका निता ढुंगानाको प्रेम, बाहिरियो यस्तो भिडियो-